Ama-silicone amahle kakhulu ama-aquariums: ukuqhathanisa kanye nomhlahlandlela | Okwezinhlanzi
Natalia Cherry | | Ama-Aquariums e-DIY
Ngaphandle kokungabaza, i-silicone yama-aquariums iyisisekelo okufanele sibe nayo uma kwenzeka kwenzeka okuthile, okungukuthi, uma ngokungazelelwe kuvela ukuvuza ku-aquarium yethu bese kuqala ukulahlekelwa amanzi. Abicah ngumkhiqizo omuhle kakhulu esizowuthola ukuwulungisa, ngoba awunamanzi ngokuphelele futhi, uma ulungiswe ngokukhethekile, awuyilimazi impilo yezinhlanzi zethu.
Kulesi sihloko sizobona ukuthi iyiphi i-silicone esingayisebenzisa ku-aquarium yethu, imikhiqizo nemibala yayo emihle kakhulu nokuthi ungathenga kuphi imikhiqizo eshibhe kunayo yonke. Ngaphezu kwalokho, uma unentshisekelo kulesi sihloko sonke sama-aquariums e-DIY, sincoma nokuthi ufunde le ndatshana ethile mayelana nayo ukwakha i-aquarium yakho yamanzi anosawoti.
1 I-aquarium abicah enconywe kakhulu
2 Kungani i-aquarium silicone ikhethekile futhi awukwazi ukusebenzisa nje noma iyiphi i-silicone?
3 Ingabe abicah angathathi hlangothi afanele ama-aquariums?
4 Imibala ye-aquarium ye-silicone
5 Ungayifaka kanjani kahle i-aquarium silicone
6 I-silicone ese-aquarium kufanele ivunyelwe ukuthi yome isikhathi esingakanani?
7 Izinhlobo ezinhle kakhulu ze-silicone ze-aquarium
8 Ungathenga kuphi abicah ashibhile e-aquarium
I-aquarium abicah enconywe kakhulu
Ukuze ungenzi iphutha ekukhetheni, ngezansi sihlanganise ngqo amanye ama-silicone e-aquarium anconywe kakhulu ongeke ube nenkinga kuwo:
Abicah abelukiwe ...
Soudal - Igobolondo ...
Kungani i-aquarium silicone ikhethekile futhi awukwazi ukusebenzisa nje noma iyiphi i-silicone?
I-Aquarium silicone iyinto ewusizo kakhulu ekulungiseni i-aquarium endala noma eyonakele noma ukuhlanganisa entsha, kanye nokunamathisela noma ukubopha izingxenye nokuhlobisa. Yize kuneminye imikhiqizo egcwalisa umsebenzi ofanayo, abicah, ngaphandle kokungabaza, isetshenziswa kakhulu, ngoba ingumkhiqizo osuselwe ku-silicone ne-acetone emelana namazinga okushisa aqine, ikwenze ube muhle. Ngendlela, le nto ayisebenzi kuma-acrylic aquariums, kepha kufanele enziwe ngengilazi.
Nokho, akuwona wonke ama-silicone athengiswayo aphephile ukusetshenziswa ku-aquarium, njengoba zifaka amakhemikhali noma ama-fungicides angathinta impilo yezinhlanzi zakho. Yize, ngokomthetho, uma ilebuli ithi "100% abicah" kuwuphawu lokuthi iphephile, kungcono ukukhetha umkhiqizo owenzelwe ngokukhethekile ukusetshenziswa kuma-aquariums.
Ingabe abicah angathathi hlangothi afanele ama-aquariums?
Singahlukanisa abicah ngamaqembu amakhulu amabili, kungaba i-acetic noma i-neutral. Esimweni sokuqala, kuyisilicone ekhipha ama-asidi futhi inephunga lesici, elifana neviniga. Kungathinta izinhlanzi ezithile futhi ngaphezulu kwalokho kuthatha isikhathi eside ukoma.
I-silicone engathathi hlangothi, ngakolunye uhlangothi, ayikhiphi noma yiluphi uhlobo lwama-acid, ayinuki futhi iyoma ngokushesha. Empeleni, ungayisebenzisela i-aquarium, yize kunconywa kakhulu ukuthi uthenge i-silicone ethile ongayisebenzisa kulo mongo, ngoba izingxenye zingashintsha phakathi kwabakhiqizi. Ama-silicone akhethekile enzelwe ukusetshenziswa kuma-aquariums, ngakho-ke ngeke uthole ukwethuka okungalindelekile.
Imibala ye-aquarium ye-silicone
Uma nje i-silicone oyithengayo ikhethekile kuma-aquariums, okungukuthi, lokho ungaphathi noma yimaphi amakhemikhali angaba yingozi empilweni yenhlanzi yakho, ukukhetha umbala owodwa noma omunye ku-silicone kumane kuyindlela yokubukeka yobuhle. Okuvame kakhulu (yize kukhona abanye, okufana mpunga noma nsundu) yimibala emhlophe, esobala noma emnyama yesilicone.
Yize kungangabazeki ukuthi umbala we-silicone wakudala kakhuluI-silicone emhlophe ayivamile ukubukeka inhle kakhulu kuma-aquariums ngenxa yombala wayo (yize izinto zishintsha uma i-aquarium yakho inohlaka olumhlophe, kunjalo). Ungayisebenzisa ukufaka izibalo kusisekelo se-aquarium.
Umbala we-silicone onconywe kakhulu wama-aquariums, ngaphandle kokungabaza, ubala. Ngeke nje kubalule ukuthi umbala wakho i-aquarium unjani, kepha uzohlangana kahle emanzini nasengilazini. Ungayisebenzisa ukunamathela noma yini noma wenze noma yikuphi ukulungiswa, ngenxa yombala wayo ongekho ngeke ubone lutho.
I-black silicone, njengasendabeni yomhlophe, ingumkhiqizo ozoncika kokuthandwayo kwakho nombala we-aquarium yakho. Njengoba i-yayas isho, okuhle ngomnyama ukuthi umbala ohlupheke kakhulu, nawo kungaba inketho enhle uma ufuna ukufihla okuthile noma ukunamathisela imihlobiso endaweni emnyama, njengesizinda.
Ungayifaka kanjani kahle i-aquarium silicone
Abicah kuhamba kahle kakhulu ukulungisa ama-aquariums, kepha awukwazi ukukusebenzisa njengoba kunjalo, kunalokho, kufanele ucabangele uchungechunge lwezimo nokuthi ungaqhubeka kanjani:
Isibonelo, uma uthenge i-aquarium yesibili, qiniseka ukuthi akukho ukuqhekeka futhi, uma kukhona, lungisa kuqala nge-silicone.
Kungcono kune khipha i-aquarium ngaphambi kokuqhubeka, ngoba indawo lapho kuzosetshenziswa khona abicah kufanele ihlanzeke futhi yomile futhi, ngaphezu kwalokho, izodinga ukoma.
Uma kwenzeka ungafuni ukukhipha yonke i-aquarium, ungayithulula kuze kube yilapho ushiye khona ingaphezulu, yize kulokhu kuzodingeka qaphela kakhulu ukuthi ungaphonsi abicah oketshezi emanzini (Njengoba ungacabanga, asiyincomi nakancane).
Uma uya lungisa ingilazi okwakulungiswe phambilini nge-silicone, hlanza izinsalela ezindala ngommese wokusiza ne-acetone. Yome kahle ngaphambi kokuyilungisa.
Abicah oyisebenzisayo Akudingeki ukuthi ibe namabhamuzaNgaphandle kwalokho zingaqhuma futhi zidale okunye ukuvuza.
Ngokunjalo uma uzojoyina izingcezu ezimbili zengilazi nge-silicone, qiniseka ukuthi kukhona okubonakalayo phakathi kwalokhu okubili. Uma ingilazi ixhumana nenye ingilazi ingaqhekeka uma incipha noma inwebeka ngenxa yokushintsha kwezinga lokushisa.
Ukulungiswa kwe- ngaphakathi ngaphandle ukuze abicah agcwalise ngokuphelele ukuqhekeka.
Ekugcineni, mayome inqobo nje uma udinga.
I-silicone ese-aquarium kufanele ivunyelwe ukuthi yome isikhathi esingakanani?
Ukuze usebenze kahle, njengoba sikutshelile, kuzofanele uyeke abicah ukuthi ome ngokuphelele, ngaphandle kwalokho kuzoba sengathi awenzanga lutho. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi uyihloniphe inqubo yokomiswa kwalo mkhiqizo, okuyi kuvamise ukuba phakathi kwamahora angama-24 nengama-48.
Izinhlobo ezinhle kakhulu ze-silicone ze-aquarium
Emakethe sithola i- amamaki amaningi abicah, ngakho-ke ukuthola okulungele i-aquarium yethu kungaba yinto ejabulisayo. Kungakho sizobona okunconywe kakhulu ohlwini olulandelayo:
Ama-silicone e-Olivé angama- zakudala emhlabeni wokwakha. Ulayini wayo wama-aquariums ugqamile ngokuba nokomisa okusheshayo, ukunamathela okuhle nokunwebeka. Ngaphezu kwalokho, bamelana nokuguga kahle kakhulu, ngakho-ke umkhiqizo uzohlala iminyaka eminingi wenza umsebenzi wawo. Njengawo wonke ama-silicone alolu hlobo, lo mkhiqizo uhambelana nengilazi yokunamathisela.
I-Rubson Verre Aquarium -...
Lo mkhiqizo othakazelisayo ukhangisa ukuthi umkhiqizo wawo, ikakhulukazi obhekiswe kuma-aquariums, uyi imelana nengcindezi yamanzi futhi iyahambisana namanzi asemanzini anosawoti. Isobala futhi, njengoba ihambisana nengilazi, ungalungisa ama-aquariums, amathangi ezinhlanzi, izindlu zokugcina izithombo, amawindi ... ngaphezu kwalokho, imelana nemisebe ye-UV emalambini, ngakho-ke ngeke ilahlekelwe ukunamathela.
Soudal ivelela ngokuba ngumkhiqizo osobala futhi olungele ama-aquariums, ekhangiswa njengemelana ikakhulukazi nezinguquko ekushiseni. Kusebenza kuphela ukuhlanganisa ingilazi nengilazi, njengama-silicone amaningi, futhi akunakupendwa. Inezinga elihle kakhulu lokunamathela.
I-Quilosa T040998 Orbasil ...
Okuhle ngemikhiqizo yalo mkhiqizo ukuthi, ngaphezu kokuklanyelwa ngokukhethekile ama-aquariums, i-cannula ine-cannula eyakhelwe ngaphakathi engabekwa ezikhundleni eziningi ezahlukene, elungele ukulungisa imifantu emincane kakhulu nokuthi ungasebenzisi isibhamu. Futhi, yoma ngokushesha futhi ivimbela zonke izinhlobo zokuvuza.
I-Wurth ihlonipha -...
Futhi sigcina nge omunye umkhiqizo onconywe kakhulu, ongakhiqizi kuphela ama-silicone ahloselwe ama-aquariums, kodwa futhi isetshenziswa kakhulu emkhakheni wobungcweti. I-Wurth silicone ivelela ukomisa ngokushesha okukhulu, kungabi kubi ngokuhamba kwesikhathi, ukumelana namazinga okushisa aphezulu futhi aphansi futhi ukunamathela kakhulu. Kodwa-ke, kuzodingeka uqaphele ngesikhathi somiswa futhi ugcine abicah ezingeni lokushisa eliboniswe ebhodleleni.
I-Everbuild INST - 310 Ml...
Lolu phawu lokuhweba Uchwepheshe womkhiqizo we-DIY Ine-silicone enhle kakhulu kakhulu yama-aquariums. Zivelela isikhathi saso sokomisa esisheshayo, kanye nokuhambisana hhayi nengilazi kuphela, kodwa futhi ne-aluminium ne-PVC. Isobala, ayiqukethe ama-fungicides futhi kulula ukuyisebenzisa, okwenza kube inketho enconywe kakhulu.
I-silicone ekhethekile yama-aquariums alo mkhiqizo nayo ingasetshenziswa ngaphandle, njengoba limelana namanzi nesimo sezulu. Inephunga elamukelekayo, inwebeka kakhulu futhi imanamathela kahle engilazini, iyenze ilungele ukulungisa noma ukwakha ama-aquariums.
Ungathenga kuphi abicah ashibhile e-aquarium
Kukhona izindawo eziningi ezahlukahlukene lapho singathenga khona i-aquarium silicone, ngoba ukuthengiswa kwayo akukhawulelwanga ezitolo zezilwane, kodwa futhi kungenzeka ukuyithola ezindaweni ezikhethekile ku-DIY nasekwakhiweni.
Okokuqala, ku Amazon uzothola inani elihlaba umxhwele lemikhiqizo ye-silicone. Ngaphezu kwalokho, ungaxhumana nemibono yabanye abasebenzisi ukuthola futhi ukhethe i-silicone evumelana kangcono nezidingo zakho. Futhi uma une-Prime function enenkontileka, uzoba nayo ekhaya ngokushesha.
ULoyoy Merlin Ayinakho ukuhlukahluka okumangazayo, empeleni, ekhasini layo eliku-inthanethi inama-silicone amabili kuphela athize ama-aquariums avela kumikhiqizo yakwa-Orbasil ne-Axton. Into ethokozisayo ukuthi ungabheka ukuthi iyatholakala esitolo sangempela, into ewusizo kakhulu ukuphuma ngokushesha.
Ezitolo zokuthenga njenge empambana Futhi banemikhiqizo ethile ye-silicone etholakalayo, yize kungacacisiwe uma ingeyezindawo zasemanzini. Kodwa-ke, ungabheka imininingwane bese ukhetha ukuthi uyithenge ngokomzimba noma online ngeMakethe yayo, inketho ethakazelisa kakhulu.
En I-Bricomart Zine-sealant eyingqayizivele yama-aquariums, okungenani ku-inthanethi, avela kuhlobo lweBostik. Njengakwamanye ama-erbs afanayo, ungabheka ukutholakala esitolo esiseduzane nawe, usithathe noma usithenge ku-inthanethi.
Okokugcina, ku Bauhaus Futhi zine-silicone eyingqayizivele eqondene nama-aquariums nama-terrariums, asobala, ongawathola ku-inthanethi nasezitolo zawo ezibonakalayo. Isebenza ngokufana kakhulu namanye amawebhusayithi we-DIY, ngoba ungakwazi uku-oda online noma ukuwuthathe esitolo.
I-silicone yama-aquariums umhlaba wonke, ngaphandle kokungabaza, okufanele ulawulwe ukuze singabanjwa lapho i-aquarium yethu ivuza. Sitshele, ngabe kwake kwenzeka kuwe? Yikuphi okuhlangenwe nakho onakho nge-silicone? Uyawuthanda umkhiqizo othize?
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » Ama-Aquariums e-DIY » Abicah abakhiqizi